Mahara-baovao ireo Amerikàna tsy manan-kialofana, maneho hevitra ireo Rosiàna mpampiasa aterineto · Global Voices teny Malagasy
Mahara-baovao ireo Amerikàna tsy manan-kialofana, maneho hevitra ireo Rosiàna mpampiasa aterineto
"Ny vodka no solosaina finday tsara indrindra"
Nandika (fr) i Norah Mani
Voadika ny 09 Oktobra 2020 8:27 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Français, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2009)
Tamin'ny Jona, niresahany ny fahitàna ety anaty tambajotra an'ireo tsy manan-kialofana ao Etazonia, dia namoaka saripika maromaro sy lahatsoratra nadika (ros.) avy amin'ilay lahatsoratra nivoaka tamin'ny 30 May tao amin'ny Wall Street Journal, nitondra lohateny hoe “Mahara-baovao ireo tsy manan-kialofana – na eny an-dalambe, na ao amin'ny Facebook” ilay vavahadin'ny tambajotra sôsialy rosiàna Habrahabr.ru .
Niteraka fanehoankevitra niisa 93 ilay lahatsoratra niandohana avy amin'ny teny anglisy, ary amin'izao fotoana izao dia nahavory 183 ny Habrahabr.ru, izay hita eto ambany ny sasantsasany:
Eto ianao tsy mifanena amina mpirenireny manana solosaina finday izany […]
Eto, na mifanena amin'ny iray amin-dry zareo ireny aza ianao, mety tsy hosaininao mihitsy ny hoe novidiany ilay izy.
Eto, mety hisy hamono noho iny finday iny ilay mpirenireny. Ary, angamba, mety ho ireo olona mpampihatra ny lalàna ihany.
Eto, na olontsotra izao aza, ka mivoaka miaraka amin'ny solosaina finday eny an'arabe, mety tsy ho ela velona…
Eto, tsy ho isanandro ianao no hahita olontsotra iray hivingitra solosaina Macintosh))
Raha resaka lainga isaky ny volana Aprily ity dia mety ho tsy ninoako velively, fa tena henjana an, mahantra toa an'i Jôba isika raha oharina amin'ireo mpirenireny ao Etazonia.
Tranga miavaka ireny. Manana karazan'olona Mahay-Raha ihany koa isika eny anatin'ireny mpirenireny ireny. Ny iray amin-dry zareo aza dia mamorona sarimihetsika, izay nahazo loka mihitsy nandritra ireo fetibe (festivals). Saingy ny ankamaroany dia mpigàka daholo.
Eto, tsy mahavita akory mividy solosaina finday iray ny sasany amin'ireo mpianatra […]. Mampalahelo ahy izany (…)
Misy mahasamihafa azy – raha ny kely fantatro, lohataona foana ny an-dry zalahy ao Kalifôrnia. Dia misy koa ‘wifi’ marobe natao ho an'ny daholobe – sady maimaimpoana – raha ny hevitro.. Aty, [St. Pétersbourg], raha tsy manan-kialofana ianao, mandritra ny volana sivy, ny aterineto sy ny solosaina finday no zavatra farany mety hampiasa loha anao.
Eto, ny vodka no solosaina finday tsara indrindra.
Any, tsy afaka miaina lavitry ny aterineto ireo mpirenireny, fa eto indray ireo olona nahita fianarana ary manana asa tsara no tsy manana hevitra momba izay azo ampiasàna ny aterineto. Tena mahavaka be ny saina raha oharina ny fahafahana ara-bola tokoa io fahasamihafàna io.
Misy olona sasantsasany tsy afaka ny hahafantatra mihitsy hoe inona no ilàn-dry zareo solosaina, ary tena tontolo hafa tanteraka ho azy ireo izany aterineto izany.